Maaliyadda ay ku ciyaari doonto Kooxda Juventus xilli ciyaareedka dambe oo si qarsoodi ah loo helay… + SAWIRRO – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Shakhtar Donetsk iyo Real Madrid ee tartanka Champions League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Atletico Madrid iyo Liverpool ee tartanka Champions League oo la shaaciyey
Tababaraha Man United ee Ole Gunnar Solskjær oo ka jawaabay dhaleeceynta Jamie Carragher
Maaliyadda ay ku ciyaari doonto Kooxda Juventus xilli ciyaareedka dambe oo si qarsoodi ah loo helay… + SAWIRRO
Haaruun March 28, 2020
(Turin) 28 Mar 2020. Maaliyadda ay ku ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga marka ay gurigeeda ku dheelayso ayaa si qarsoodi ah daaha looga qaaday.
Juve maaliyaddaan ay ku dheeli doonto kal ciyaareedka dambe 2020-2021 marka ay joogto garoonkeeda taasoo si qarsoodi ah loogu faafiyey Internet-ka ayaa loo naqshadeeyay qaab u muuqaal eg maaliyadihii waagii hore ay isticmaali jirtay kooxda oo gacmo dheer ah.
Maaliyaddaan cusub ee ay Juventus ku dheeli doonto marka ay mininkeeda joogto fasal ciyaareedka soo aaddan ee 2020/21 waxaa si qarsoodi ah ku heshay oo sii daysay footyheadlines.com oo inta badan shaaca ka qaaday labiska ay kooxuhu ku dheeli doonaan ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin.
Funaanaddaan ay ku dheeli doonto Juve marka ay garoonkeeda ku sugan tahay xilli ciyaareedka soo aaddan ayaa midabkeedu yahay mid diilimo madow iyo caddaan ah leh.
Maaliyaddaan ay Juve ku dheeli doonto fasalka soo aaddan ayaa ah mid gacamo dheer ah, waxaana xabadka kaga dheggan astaanta kooxda ee ah xarafka ‘J’.
Shirkadda Adidas ayaa farsameysay funaaddaan, waana mid ka mid ah maaliyad dhaqamadeedyada kooxda.
Juventus maaliyaddaan ay ku ciyaari doonto 2020-21 ayaa la warinayaa in la kala siisan doono 55 milyan euro, waxaana ay kooxdu sii daynaysaa dabayaaqada xagaaga 2020 – Sebtember.
Charlie Nicholas oo ku wargeliyey kooxdiisii hore ee Arsenal halka arrin oo ay isaga faxisi karto Pierre-Emerick Aubameyang
Kooxda Liverpool oo wadahadallo la bilowday xiddig bartilmaameed u ah Real Madrid iyo Barcelona